Myanmar Growing at Similar Rate to ASEAN Neighbors | Myanmar Business Today
HomeBusinessLocalMyanmar Growing at Similar Rate to ASEAN Neighbors
Myanmar Growing at Similar Rate to ASEAN Neighbors
Myanmar’s economy has been growing atasimilar rate to its ASEAN neighbors, U Soe Min, Deputy Governor of the Central Bank of Myanmar, told the country’s highest legislative body on January 27.
“Economic growth is not very much different from the previous year,” he said. “Generally, the country’s economic growth in the 2016-2017 and 2017-2018 fiscal years was not different from that of Laos, Cambodia and Vietnam.”
The country recorded GDP growth of 5.9 percent in fiscal 2016-2017, 6.8 percent in 2017-2018 and 6.5 percent during the six-month 2018 transitional fiscal year.
Economic growth is linked to inflation. Myanmar saw 4.66 percent inflation in September 2017, 4.03 percent in March 2018, and 5.94 percent in September 2018.
The increase in inflation was driven by higher fuel prices, commodity price hikes due to natural disasters including floods and the weakening of the kyat against the U.S. dollar, U Soe Min said.
Compared to its ASEAN neighbors, Myanmar’s inflation rate was the second-highest after the Philippines’.
In its report on Myanmar released January 15, the World Bank estimates that the country will see GDP growth of 6.4 percent thanks to higher infrastructure investments and other government spending in the run-up to the 2020 election.
“The sector with the most potential this fiscal year is the power sector, followed by oil and gas and logistics, especially at ports. The Internal Revenue Department will issue orders for bonded warehouse this year,” said U Aung Naing Oo, Permanent Secretary for Investment and Foreign Relations.
The economy is showing signs of growth on the strength of the three sectors, he added.
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမှန်စီးပွားရေးတိုးတက်မှု နှုန်းသည် အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ် ပါက သိသာစွာကွာခြင်းမရှိကြောင်း မြန်မာ နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးမင်း က ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်တွင် ပြုလုပ်သော ဒုတိယ အကြိမ်မြောက်ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော် အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
”ယခင်နှစ် အလားတူကာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ် ဆိုရင်တော့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းက သိသာစွာ ပြောင်းလဲမှု မရှိကြောင်း တွေ့ရပါ တယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းက အာဆီယံ နိုင်ငံ အချို့ဖြစ်တဲ့ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဗီယက် နမ်တို့နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂ဝ၁၆ -၂ဝ၁၇ နဲ့ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်များမှာ အဆိုပါ နိုင်ငံများနဲ့ များစွာကွာဟမှုမရှိကြောင်း တွေ့ ရှိရပါတယ်”ဟု ¤င်းက ပြောသည်။
၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အမှန်စီးပွား ရေးတိုးတက်မှုနူန်း ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ပြီး၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် စီးပွား ရေးတိုးတက်မှုနှုန်း ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလထိ ခြောက်လတာ ကာလအတွင်း စီးပွားရေးတိုး တက်မှုနှုန်းမှာ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် အနေဖြင့် နိုင်ငံအတွင်း ငွေကြေးတည်ငြိမ်မှုများရှိစေရန် ငွေကြေးမူဝါဒ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သော ပြည် တွင်းဈေးနှုန်း တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန်နှင့် မူဝါဒ မူဘောင်အဖြစ် သီးသန့်ငွေကြေး ပမာဏကို ရည်မှန်းချက်ထားရှိကာ ချမှတ်အကောင် အထည်ဖော်လျက်ရှိနေ ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ တော် ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးမင်းက ပြောသည်။ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းသည် ငွေ ကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းဖြင့် ချိတ်ဆက်လျက်ရှိ နေပြီး ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း ပျှမ်းမျှငွေကြေးဖောင်းပွမှုမှာ ၄ ဒသမ ၆၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂ဝ၁၈ မတ်လတွင် ပျှမ်းမျှငွေ ကြေးဖောင်းပွမှုမှာ ၄ ဒသမ ဝ၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂ဝ၁၈ စက်တင်ဘာလတွင် ပျှမ်းမျှငွေကြေး ဖောင်းပွမှုမှာ ၅ ဒသမ ၉၄ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်ခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့မြင့်တက်ခဲ့ရခြင်းမှာလည်း အဆို ပါ နှစ်အတွင်းလောင်စာဆီ၊ စက်သုံးဆီဈေး နှုန်းများမြင့်တက်ခဲ့ခြင်း ၊ သဘာဝဘေး အန္တရာယ်များဖြစ်သည့် ရေကြီးရေလျှံမှုများ ကြောင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု ခက်ခဲကာ ကုန် ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်ခဲ့ခြင်း နိုင်ငံခြားငွေ ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာပြီး မြန်မာကျပ်ငွေ တန်ဖိုး ကျဆင်းခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ဦးစိုးမင်းက ပြောသည်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏ငွေကြေးဖောင်းပွမှု နှုန်းမှာ အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် နှိုင်း ယှဉ်လျှင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံထက်လျော့နည်းပြီး ကျန်ရှိသည့်နိုင်ငံများထက်မြင့်မားနေကြောင်း သိရသည်။
Previous articleOBG Optimistic on Myanmar Economic Outlook
Next articleEverything You Should Know About The New Coronavirus Outbreak